Adobe Audition wuxuu hadda la jaan qaadayaa processor-ka Apple ee M1 | Waxaan ka socdaa mac
Markii bilooyinku socdaan, codsiyada shirkadda weyn ee Adobe waa la cusbooneysiiyaa si tartiib tartiib ah si loo bixiyo taageerada hooyo ee processor-ka Apple ARM, oo loogu magac daray Apple Silicon. Codsigii ugu dambeeyay ee soosaarahan si uu u taageero Apple's M1s waa Adobe Audition.
Sida laga soo xigtay shirkadda, noocaani cusub wuxuu bixiyaa a waxqabad aad uga dhakhso badan kuwii ka horreeyay, sida ay tahay isbeddelka caadiga ah ee noocyadan. Intaa waxaa dheer, laga bilaabo Adobe waxay ku kordhiyeen hawl cusub si loo baabi'iyo aamusnaanta duubista si otomaatig ah oo aan saameyn ku yeelan tayada ugu dambeysa.
Adobe wuxuu ku andacooday in nooca cusub oo asal ahaan la jaan qaadaya processor-ka M1 uu siinayo waxqabad hagaagsan oo loogu talagalay duubista iyo isku darka tayada maqalka ee tayada sare leh. Waxaa ka mid ah horumarada ugu muhiimsan ee noocan ah uu noo fidinayo misku darka dhakhso iyo haya'ad ee saamaynta audio iyo sidoo kale cusboonaysiinta waqtiga-dhabta ah ee Tifatiraha Muuqaalka Muuqaalka.
Si kastaba ha noqotee, maahan dhammaan war wanaagsan, sida isagubaDuubista CD lama heli karo. Loogu talagalay socodka shaqada fiidiyowga, koodhadhka; DV, XDCamEX, FastMpeg, DNX, Sony 65, iyo Cineform ayaan haatan lagu taageerin Audition on M1.
Noocaan cusub waxaa ka mid ah shaqada Ka saar aamusnaanta, hawl u oggolaanaysa in la aqoonsado oo la tirtiro meelaha aamusan ee duubista iyada oo aan luminayn la jaanqaadka raadadka kale ee aan ku shaqeyno. Shaqadani waxay ku habboon tahay nadiifinta duubista codka wareysiga sida boodhadhka ama waxyaabaha maqalka ah.
Xuduudaha shaqadan lagu hagaajin karaa xaaladaha gaarka ah sida asalka buuqa badan ama heerarka mugga kala duwan ee u dhexeeya dadka ku lugta leh duubista waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si fudud u aqoonsato oo aad u tirtirto gobollada wadada ee aan lahayn wax nuxur ah, waqtiga iyo muddada u habeysan tafatirka.
Nooca Adobe Audition ee ku habboon processor-ka M1 ayaa hadda ah waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Creative Cloud waana nooca 1.4.2.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Adobe Audition wuxuu hadda taageeraa processor-ka Apple ee M1
Sida ugu fudud ee looga baxo e-maylka ku jira Boosta